Dimitar Berbatov oo shaaca ka qaaday doorkii uu ku lahaa in Man United ay la soo saxiixato Anthony Martial – Gool FM
Dimitar Berbatov oo shaaca ka qaaday doorkii uu ku lahaa in Man United ay la soo saxiixato Anthony Martial
Dajiye April 29, 2020
(Manchester) 29 Abril 2020. Laacibkii hore kooxda kubadda cagta Manchester United iyo xulka qaranka Bulgaria ee Dimitar Berbatov, ayaa shaaca ka qaaday doorkii uu ku lahaa in Red Devils ay la soo saxiixato Anthony Martial.
Wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Dimitar Berbatov, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waqti cajiib ah ayaan ku qaatay Monaco, markii aan halkaas tagey, Claudio Ranieri ayaa macalin u ahaa, waxaa kaloo kooxda ku sugnaa Anthony Martial, James Rodríguez, Fabinho, Ricardo Carvalho, Radamel Falcao iyo Danijel Subašić”.
“Madaxa indho-indheynta ee kooxda Manchester United ayaa i soo wacay wuxuuna i waydiiyay aragtidayda ku saabsan Anthony Martial”.
“Waxaan u sheegay in wiilka uu fiican yahay, isla markaana uu noqon karo ciyaaryahan weyn, balse uu u baahan yahay qof ku hagta gudaha garoonka”.
“Uma maleynayo in dadku ay sifiican u qiimeeyaan, waxaan rajeynayaa inuu ku sii socdo wadada saxda ah.”
Si kastaba ha noqotee, Anthony Martial ayaa yimid kooxda Manchester United sanadkii 2015, tan iyo xilligaas wuxuu ku ciyaaray maaliyada Red Devils 208 kulan tartamada oo dhan, isagoo dhaliyay 64 gool, wuxuuna sidoo kale ka caawiyay saaxiibadiis 34 gool kale.
Sane oo Taleefoon kula hadlay xubin muhiim ka ah qolka labiska Kooxda Bayern Munich… (Muxuu kala hadlay?)
"Neymar wuxuu haystaa waxa ay ku qaadanayso inuu noqdo kan ugu fiican Adduunka" – Unai Emery